Vaovao - Fampirantiana Rosiana 2019
Fampirantiana Rosiana 2019
Nanatrika fampirantiana tany Moskoa tamin'ny taona 2019 ny GHORIT.
Anaran'ny fampirantiana: Tambajotra elektrika ao Russia-2019
Fotoana fampirantiana: 3-6 desambra 2019, 4 andro ny fotoana fampirantiana
Toerana: Ivotoerana fampirantiana Moskoa, GAO VVC, Estate 119, Mir Prospect, Moskoa, 129223
Tamin'ny 2016, manodidina ny 1,8 trillion roubles ny tsenan'ny fitaovana Rosiana. Raha ny angom-baovao avy amin'ny minisiteran'ny angovo rosiana, maherin'ny 60% ny fitaovana elektrika mihoatra ny androm-piainana.
Any Rosia, mihoatra ny antsasaky ny fitaovana famokarana herinaratra dia mbola miasa mandritra ny 30 taona mahery, ary manodidina ny 60% -80% amin'ireo tsipika fandefasana ao amin'ny fantsom-pandefasana dia mihantitra tokoa. Araka ny vinavinan'ny Federasiona Rosiana Grid Corporation, ao anatin'ny 10 taona ho avy, ny vola tafiditra amin'ny fanovana ny fantsom-pandefasana dia hahatratra 100 miliara dolara amerikana.
3. Sehatra fampirantiana:
Injeniera elektrika, fitaovana fampitaovana ary fizarana herinaratra, fitaovana mandeha ho azy amin'ny herinaratra, fitaovana mandeha ho azy amin'ny fizarana herinaratra, rafitra famindrana herinaratra, rindrambaiko rafitra herinaratra, fitaovana fampitaovana ary fanovana mahery vaika avo lenta, mpanova, avo, salantsalany ary fampidinana herinaratra ambany, kitapo switch, Fitaovana mifandraika amin'ny fanamboarana ny herinaratra an-tanan-dehibe sy ambanivohitra ary fanovana sns ...
Fitaovana fanamafisam-peo amin'ny alàlan'ny fitaovana fanaraha-maso an-tserasera-, fizarana fitaovana fanaraha-maso ny tamba-jotra, fitaovana fanaraha-maso ny rafitra grid, rafitra fanaraha-maso lavitra., Rafitra fanalefahana (de) rafitra, fitaovana fanonerana herinaratra reactive, reactor, bushing voltage avo, arrester ny tselatra, insulator, Grounding fitaovana, fiarovana fiarovana ary mandeha ho azy
Fitaovana sy metatra, metatra herinaratra elektrika, tariby sy tariby, fantsom-by, fitaovana famaohana, motera, relay, capacitor, circuit breakers, contactors, inverters, fitaovana elektrika elektronika avo lenta sy antonony ary ambany, fananganana herinaratra, vokatra herinaratra, herinaratra isan-karazany ary ny teknolojia fiarovana ny herinaratra, ny haitao sy ny fitaovana enti-mamonjy herinaratra, ny tobim-piantsonana boaty isan-karazany, ny fitaovam-pikojakojana herinaratra, ny fiara mandeha amin'ny herinaratra elektrika, ny fitaovana famokarana herinaratra kely, ny famokarana gazoala, ny fitaovana fanamafisana herinaratra sns